Iswiidhen waxay biloowday 50-meeyadii taageerada Koonfur Afrika - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Iswiidhen waxay biloowday 50-meeyadii taageerada Koonfur Afrika
La daabacay onsdag 26 juni 2013 kl 11.46
Iswiidhen: Dalkii ugu horeeyay ee cunaqabateeya shirkadaha Koonfur Afrika
Bishii feeberaayo ee sannadkii 1990 ayaa Nilson Mandela laga soo daayay xabsi uu ku sugnaa ku dhowaad 28 sannadood, isla-markaasina la ogolaaday in ururkii ANC loo aqoonsadau urur madax-bannaan oo sharci ku dhisan. Goobta oodda lagaga qaaday xabsiga Nilson Mandela ayuu ku sugnaa weriye ka howl-gala idaacadda Iswiidhen Bengt Therner:
- Waa lin taariikhi ah. Mandela ayaa xabsiga laga sii daayey. Wuxuuna socod kaga soo baxay isaga oo ey gacanta is heystaan xaaskiisii waagaa Winnie Mandela.
Xabsiga dabadii ayaa Mandela loo doortay ku-xigeenka hoggaanka ururka ANC. Iyada oo sannadkii 1991 loo doortaya jagada hoggaanka ANC, halkaa oo uu ka bilaabay tallaabooyin la xiriirey sidii si nabad ah uu ururkiisu ula wareegi lahaa hoggaanka dalka loona gaarsiin lahaa habka dimoqoraadiyadda ee talo-wadaagga ku dhisan.
Dalka Iswiidhen ayaa gacan ballaaran ka geeystay taageerada uu u fidiyo shacabka reer Koonfur Afrika muddadii uu ku hoos jiray nidaamkii midab-takoorka wixii laga bilaabo 1950 meeyadii. Iyadoona uu dalkani ahaa waddankii ugu horeeyay ee waddammada galbeedka kuna soo roga alaabada shirkadaha dalkaasi cuna-qabateyn sannadihii toddobaatameeyadii.
Dalka Iswiidhen ayaa taageero qarsoodi ah u fulin jiray ururka ANC, iyada oo weliba ey waddammo badani u aqoonsanaayeen ururka ANC inuu ahaa urur argagixis-nimo.
Karin Olsson, waxay ka mid ahayd dadyoowgii u ololeyn jiray ururka laga bilaabo sannihii lixdameeyadii. Dhanka kale waxay xubin ka ahyd ururradii kooxaha Afrika, iyadoona bilowgii sannadihii sagaashameeyadii riwaayad ugu qabatay xarunta riwaayadaha ee Solna, isla-markaana ay u suurtagashay inay la kulanto Nilson Mandela. Kolkii ay maqashay inuu soo caga-dhigtay Solna ayay iyada oo uu hayo argagax ay ka hortagtay si ay taksiga uga soo dhoweeyso:
- Aad iyo aad ayay cajiib u ahayd. Wuxuu ahaa shakhsi furfuran oo soo dhoweeyn wacan leh. Waxaa la dareemayay sidii ruux muddo la yaqiiney oo la jecleeysto sidii markiiba saaxiib loola noqon lahaa, xitaa haddii uu kulankayagu qaatay muddo gaaban, qiyaastii 15-daqiiqadood.
Maxaad ku wada hadasheen kolkii aad la kulantay?
- Wuxuu ii sheegay inay sharaf u tahay inuu suurtagal u helay inuu ila kulmo. Markaa ku iri: Aniga ayay sharaf ii tahay. Isagoona iigu war-celiyay inaan anigu ahay ruuxa riwaayadan iyo waxan oo dhan soo abaabulay, sidaa daraadeedna loo baahan yahay inaan fahmo inay isaga sharf u tahay kulanka uu ila kulmay.
Nilson Mandela ayaa ka mid ah shakhsiyaad ugu waaweyn, hadii uusanba ahayn kan ugu weyn ee qarniga lagu xasuusan doono, hadday noqon lahayd kaalintii uu ka soo qaatay halgankii xoriyadda ee dalkaasi Koonfurta Afrika. La dagaalankii nidaamkii midab kala sooca. U hadlidda xuquuqda dadyoowga tabaaleeysan iyo sidoo kale xuquuqda bani aadamka. Waxaa ka mid ahaa ereyadiisa mar uu ka hadlayay xarunta qaramada midoobey, kolkii uu iska casilay jagada madax-wayne-nimo:
- Aniga oo weli fadhiya tuulada aan deggenahay ee Kanu. Waxaan halkeeda ka sii wadi doonaa sidii aan iftiinka shumaca ugu sii xajin lahaa dalkayga, carriga agagaarkiisa ah, qaaradda aannu ku dhaqannahay iyo dhammaan caalamka iyo inaan marna la ogolaan in ruux xorriyaddiisa laga xayuubiyo sida middii nalgu sameeyey, inaan cidna qax la gelin sidii nalagu sameeyey, inaan cidna gaajo lagu eegin, sidii nalagu sameeyey iyo inaan xuquuqdeeda bani’aadmi-nimo cidna loogu tuman sidii nalugu sameeyey.